ဖုတ်ကောင်, Run! (အခမဲ့) | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဖုတ်ကောင်, Run! (အခမဲ့)
ဖုတ်ကောင်, Run! (Free) က APK ကို
သင်၏အသက်တာ၏ပြေးဘို့အဆင်သင့်ရယူပါ။ တစ်ခုမော်ကွန်းစွန့်စားမှုအပေါ်5သန်းပြေးသမား Join!
သင်သည်သင်၏ဖိနပ်ကိုကြိုးနဲ့တုတ်, သင့်နားကြပ်ပေါ်တွင်တင်ပြင်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းယူပါ။ သငျသညျသူတို့စကားကိုနားထောင်တဲ့အခါသင်အနိုင်နိုင် 100 ကိုက်ဖုံးလွှမ်းပါတယ်။ သူတို့ကအနီးကပ်ဖြစ်ရမည်။ သင်, တိုင်းလမ်းပေါ်မှာသောသူတို့သည်အော်ဟစ်တိုင်း guttural အသက်ရှုစကားကိုနားထောငျနိုငျသညျ - သူတို့နေရာတိုင်းပါပဲ။ Zombies ။ Run: သင်လုပျနိုငျတစ်ဦးတည်းသာအရာရှိတယ်!
ဖုတ်ကောင်, Run! တစ်ဦး Ultra-စွဲငြိဖွယ်ရာပြေးဂိမ်းနဲ့ audio စွန့်စားမှုဆုရဝတ္ထုရေးဆရာနောမိ Alderman နှင့်အတူပူးတွဲဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြေးကျွန်တော်တို့ရဲ့စွဲငြိဖွယ်ရာအသံဒရာမာသင့်ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်ဖုတ်ကောင်စွန့်စားမှုဇာတ်လမ်း၏ဗဟိုမှာသငျသညျချပြီးနှင့်အတူ, သင်သူရဲကောင်းပါပဲတဲ့မစ်ရှင်ဖြစ်လာသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သီချင်းစာရင်းကိုထံမှနှလုံး-ချပေးအသံဒရာမာနှင့်သွေးခုန်နှုန်း-pounding သီချင်းတွေကို၏ပြီးပြည့်စုံသောရောနှောဖို့ run နေစဉ်, သငျသညျအိမ်ပြန်သင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းကြီးထွားဖို့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများစုဆောင်းပါလိမ့်မယ်။
ဘီဘီစီသတင်း - "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းအစစ်အမှန်များအတွက် run ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ "
ဝါယာကြိုး - "Runkeeper ရဲ့ style အတွက်, တစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မှာတော့ဖုတ်ကောင်လှည့်ကွက်တွေနဲ့။ "
Lifehacker - "တစ်ဦးကယ့်ကိုအေးမြပြင်ပတွင်ရရန်လမ်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း။ "
CNN က - "ဂိမ်းတစ်ခုသို့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းနှစ်မြောက်မွေးနေ့ - တစ်ကြောက်စရာ, ကြောက်စရာဂိမ်း။ "
TIME က - "တစ်ဦးဖုတ်ကောင်ဂိမ်းအပေါငျးတို့သပျော်စရာယူနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး app ကိုစ funnels ။ "
လမ်းလျှောက်ပြေးရတာ, OR ဘယ်နေရာမှာမဆို Run
ဖုတ်ကောင်, Run! ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်မည်သည့်အမြန်နှုန်းမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သငျသညျ, တစ်ပန်းခြံအတွင်းပြေးရတာတဲ့ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်ဖွင့်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးလမ်းကြောင်းတလျှောက်လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်။ သူကတောင်ပြေးစက်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်တယ်!
သင် Runners ကွ 5
ဘဝတွေကိုရာပေါင်းများစွာသင်တို့အပေါ်မှာရေတွက်နေကြသည်။ သငျသညျအရေးပါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများစုဆောင်းနှင့် roving ဖုတ်ကောင်အလုံးအရင်းရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်လူ့ယဉ်ကျေးမှု၏ခိုင်ခံ့သောမီးပြတိုက်သို့အနည်းငယ်တုန်လှုပ်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူကနေသင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းပြန်ဆောက်ဖို့ရရှိပါသည်။ သူတို့ကိုသင်ကယ်တင်နှင့်ဖုတ်ကောင်ကမ္ဘာပျက်ပတ်သက်သောအမှန်တရားကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသလား?
သင်သည်သင်၏အပြေးဘယ်မှာရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအဘို့အလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရဲ့ရုန်းကန်တစ်ခုမော်ကွန်းဇာတ်လမ်းအတွက်သူရဲကောင်း * တကယ် * ကိစ္စရပ်များဖြစ်လာများနှင့်လည်းအဝတ်မခြုံဘဲခံရဖို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းနက်နဲသောအရာရှိတယ်။ အခမဲ့ပထမလေးမစ်ရှင် Play နှင့်အပတ်တိုင်းတဦးတည်းအပိုမစ်ရှင်င့်ပါ။
THE ကအာဗေလ Runners'S Club JOIN
န့်အသတ်ကစားဘို့ချက်ချင်းအားလုံး 300 + ဇာတ်လမ်းမစ်ရှင်သော့ဖွင့်, ပေါင်း Interval သည်လေ့ကျင့်ရေးနှင့် AirDrop Mode ကို။ အသင်းဝင် $ 5.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ / လသို့မဟုတ် $ 34.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ / တစ်နှစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်စာရင်းပေးသွင်းထားအလိုအလြောကျပြည့်ကြလိမ့်မည်။ (လက်ရှိပေးဆောင်ကစားသမားတစ်ဦးကိုအထူးလျှော့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နှုန်းကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်အပေါင်းအားလုံးဂိမ်းသည် Modes နှင့် S1-3 မစ်ရှင်မှအခမဲ့ access ကိုရလိမ့်မည်) ။
သငျသညျအပြေးခင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထုံးစံဖွင့်စာရင်းများကို Choose: ဇာတ်လမ်းပြောင်းလဲနေသောရေဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်စကားသံကိုအသံသွင်းတဲ့စီးရီးအားဖြင့်သင်တို့၏အပုဒ်ကြား၌တခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါ။
လုံလောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မဟုတ်ကမ္ဘာကြီးကိုသိမ်းဆည်းနေသည်? တစ်ထစ်သောအရာတို့ကိုဖွင့်ကန်ဖို့ Chase ကိုသက်ဝင်။ သင်သည်သင်၏ခြောက်လအပေါ်ဖုတ်ကောင်စကားကိုနားထောငျသောအခါ, သူတို့နီးကပ်လွန်းမရယူမီအရှိန်မြှင့်ရန်အချိန်ပါပဲ။ သငျသညျတိုင်းလူအုပ်ကြီးကလွတ်မြောက်ရန်နိုင်သလား, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုသင်အာရုံမှသင့် hard-ရရှိခဲ့သည်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအချို့ drop ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်နည်း ထွက်ရှာတွေ့မှတစ်ဦးတည်းသာလမ်းရှိပါတယ်။
သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုပြေးနှင့်ဂိမ်းတိုးတက်မှုများအတွက်အသေးစိတ်ဂရပ်များနှင့်စာရင်းဇယား View - နှင့်ဖုတ်ကောင်လွတ်နေချိန်တွင်သင်ကအများဆုံးကစားထားတဲ့သီချင်းတွေကိုထွက်များစစ်ဆေး!
သငျသညျကို run အခါတိုင်း, သင်ဆေးပညာ, ဘက်ထရီနှင့်စားနပ်ရိက္ခာများကဲ့သို့အရေးပါသောအထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများသည်အလိုအလျောက်စုဆောင်းပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအိမျပွင့်ပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏အလွန်ကိုယ်ပိုင် Post-ကမ္ဘာပျက်အသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ဖို့သူတို့ကိုကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်ဖုတ်ကောင်ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ကာကွယ်ရေးအားကောင်းလာစေရန်, ဒါမှမဟုတ်အသစ်တခုလယ်ယာတည်ဆောက်သလား? သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူရလဒ်တွေကိုမျှဝေပါနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်များအတွက်တောက်ပအနာဂတ်စေနိုငျသောအထဲကရှာပါ။
Google က WEAR OS ကိုနဲ့အတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Wear OS ကို app ကိုအတူတစ်ချက်မှာသင့်ရဲ့ run တိုးတက်မှုနှင့်မြန်နှုန်းစစ်ဆေးပါ။ ယခုသင်သည်သင်၏ဖုန်းနှင့်အတူ fumbling မရှိဘဲဖုတ်ကောင်လွတ်မြောက်ရန်နိုငျပါသညျ!
မြေပုံများနှင့်အပြည့်အဝဖွင့်သမိုင်းနှင့်အတူပြည့်စုံ, အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ပြေးကြည့်ရှုဝေမျှဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ ZombieLink ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ Register!
- အထက်က Android 5.0 သို့မဟုတ်လိုအပ်သည်
- နောက်ခံ running GPS စနစ်၏အဆက်အသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာဘက်ထရီသက်တမ်းကိုလျော့ချပေးနိုင်သည်။
@zombiesrungame မှာကျွန်တော်တို့ကို Follow နှင့် zombiesrungame.com သွားရောက်ကြည့်ရှု
8.0.6 ကို Google ဂိမ်းများပေါင်းစည်းမှု Play ဘို့ပြင်ဆင်ခြင်းများပါဝင်သည်။
8.0.5 တှငျကြှနျုပျတို့တိုးတက်လာသောဖုတ်ကောင် Chase, အဝေး-အေးအာဗေလ Runner ရဲ့ကလပ်မှ Pro ကိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အမည်ပြောင်းနှင့် bug တွေတစ်ပြင်လုံးကိုအိမ်ရှင် fixed ။
ZR ခံစား? ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
297.70 ကို MB
သေ2သို့: ...
အပင် vs ...